एकैरात २ काण्ड: प्रहरी हवल्दार श्रीमतीसंग श्रीमान् अर्कैको श्रीमतीसंग ! – All top Here
Home/समाचार/एकैरात २ काण्ड: प्रहरी हवल्दार श्रीमतीसंग श्रीमान् अर्कैको श्रीमतीसंग !
सोलुखुम्बु, सोलुखुम्बुको नेचासल्यान गाउँपालिका ३ नेचाविहिबारेकी एक विवाहित महिलालाई ज’बरजस्ती क’रणी गरेको आरोपमा इलाका प्रहरी कार्यालय नेचामा कार्यरत प्रहरी हवल्दार महेश्वर श्रेष्ठ पक्राउ परेका छन् ।मंगलबार राति प्रहरी हवल्दार श्रेष्ठलाई स्थानीय २३ बर्षिय महिलासंग यौ’न स’म्पर्क गरिरहेको अवस्थामा स्थानीयले देखेका थिए । घ’टनास्थलको प्र’माणको आधारमा आरोपित श्रेष्ठलाई प्रहरीले पक्राउ गरि सल्लेरी ल्याएको थियो ।श्रीमान् वैदेशीक रोजगारीमा रहेका उनको ३ सन्तान रहेको बुझिएको छ ।
थप दुई जनाको मृत्यु :७२ जिल्ला मा कोरोना
पाँचथर हत्याकाण्डः हत्यामा प्रयोग गरिएको हतियार लुगा र झोला भेटियो ! भेटियो
शालिकराम पुडासैनीले मृ*त्यु अघि जग्गा व्यवसायीसँग भेटघाट